कोरोनाभाइरसको संकट कहिले र कसरी अन्त्य होला ! | Ratopati
उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने आगामी तीन महिनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण घट्न सक्ला तर यसको जरा नै उखेलेर फाल्न सम्भव भने देखिदैँन । यो समाप्त हुन धेरै समय लाग्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । कोरोनामुक्त हुनका लागि वर्ष दिन पनि लाग्न सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
ठूलो समुदाय तथा मुलुकका लागि सबैकुरा बन्द गर्ने नीति लामो समयसम्मका लागि सम्भव देखिदैँन । यस अतिरिक्त सामाजिक र आर्थिक नोक्सान पनि विध्वंशकारी नै हुनेछ ।
कोरोनाका कारण कुन देशमा के भयो ? मुख्य अपडेट्स
साढे पाँच सय रुपैयाँ तिरेर मिनेटैमा आउनेछ कोरोना परीक्षणको नतिजाः डब्ल्यूएचओ